Akpa Cheertainer n'ime igbe abụrụla ọmarịcha nkwakọ ngwaahịa ọhụrụ
N'oge a, akpa Cheertainer na nkwakọ ngwaahịa abanyela n'ime ihe ọ drinksụ drinksụ ihe ọṅụṅụ, ndị ọrụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe, reagents ahụike, fatịlaịza mmiri mmiri, ọgwụ pesticides na ọtụtụ ubi ndị ọzọ. Tụnyere ụdị nkwakọ ngwaahịa ọdịnala, uru asọmpi nke akpa dị na igbe gụnyere: ogologo ndụ nchekwa, ọkụ ka mma…
Kedu ihe bụ nkwakọba akpa n'ime igbe (Cheertainer)?
Nkwakọ ngwaahịa akpa-in-igbe (Cheertainer) na-eji igbe, akpa na ihe dabara adaba iji bufee na kesaa ngwaahịa mmiri mmiri nke ọma na enweghị mmetọ. A na-arụ akpa ahụ site n'ígwé nke ihe nkiri a na-emechi ọnụ ma chekwa ya iji chebe àgwà ngwaahịa ma chekwaa ya n'ime ya pụọ ​​​​na fi ...
Igbe Cheertainer n'ime akpa BIB akpa, dabara adaba maka nhọrọ ụlọ nke nkwakọ ngwaahịa mmiri ọñụñụ
Akpa Cheertainer na igbe, ma ọ bụ nkwakọ ngwaahịa BIB maka mkpụmkpụ. Emebere ya n'Australia na 1965 ma buru ụzọ jiri ya na ụlọ ọrụ mmanya, mana ọ gbasaala ugbu a ịgụnye ụdị ngwaahịa ndị ọzọ dị ka juices, soft drinks, mmanụ na sauces. Tụnyere mmiri igbe na aluminom...
Akpa BIB n'ime igbe bụ ụdị nkwakọ ngwaahịa zuru oke maka mmiri ọṅụṅụ
Nkwakọ ngwaahịa akpa-in-the-igbe, nke a na-akpọ nkwakọ ngwaahịa BIB, bụ ụdị nkwakọ ngwaahịa kacha aga nke ọma na nkwakọ ngwaahịa ọhụrụ zuru ụwa ọnụ n'afọ ndị na-adịbeghị anya. N'ihi njirimara ya nke nchekwa, ahụike, ịdị mma na nchekwa gburugburu ebe obibi, ọ na-etolite ngwa ngwa n'ime nkwakọ ihe ọṅụṅụ na-eme ka ọ bụrụ ...
site admin na 21-10-25
Ihe mejupụtara akpa n'ime igbe bụ akpa nwere ngwaọrụ mpụta mmiri na katọn corrugated n'èzí. Tụnyere ụdị nkwakọ ngwaahịa ọdịnala, akpa igbe nwere ogologo ndụ nchekwa (igbe mmanya, ihe ọ juiceụụ mkpụrụ osisi nwere ike idowe akpa akara 2-3 afọ, mgbe mmeghe nwere ike ịchekwa ọnwa 2), ka mma zere ìhè na oxygen r ...
Akpa n'ime igbe bụ usoro nkwakọ ngwaahịa mmiri ọṅụṅụ kachasị mma na gburugburu ebe obibi
site admin na 21-10-18
Akpa-in-a-igbe bụ usoro nkwakọ ngwaahịa kachasị mma na gburugburu ebe obibi maka mmiri ọṅụṅụ dị oke ọnụ, na-eji 80% obere ihe nkwakọ ngwaahịa karịa karama PET ma ọ bụ bọket PC kwa olu nke mmiri ọṅụṅụ, nke pụtara obere plastik na obere ihe mkpofu. Obi abụọ adịghị ya na nchebe nke ...
Kedu ụdị nkwakọ ngwaahịa dị na igbe
Igbe n'ime akpa bụ ụdị nkwakọ ngwaahịa ọhụrụ. Akpa ndị a bụ nke aluminized PET, LDPE, na nylon ihe mejupụtara, sterile na sterilized, na-eji akpa ndị a na njikọ tap na katọn. Igbe-n'ime igbe bụ nke ngalaba gburugburu ebe obibi n'ihi na o nwere...
Akpa n'ime nkwakọ ngwaahịa dị mfe
Akpa dị na nkwakọ ngwaahịa na-eji igbe, akpa, na ihe dabara adaba iji bufee na kesaa ngwaahịa mmiri mmiri nke ọma ma na-enweghị mmetọ. A na-arụ akpa ahụ site na n'ígwé nke ihe nkiri a na-emechi ọnụ ma chekwa ya iji chebe àgwà ngwaahịa ahụ ma chekwaa ya n'ime ya ka ọ ghara ijupụta site na ...
Nkọwa nke akpa nkwakọ ngwaahịa mmiri mmiri anyị sitere na 1L-20L ma nwee ike ịhazi ya dịka ihe ndị ahịa chọrọ iji gboo ihe dị iche iche. 1. Ihe ọṅụṅụ, nkwakọ ngwaahịa jam nwere ike iji mee ihe n'ọtụtụ ebe na mpempe akwụkwọ tomato, ihe ọṅụṅụ oroma, ihe ọṅụṅụ mkpụrụ vaịn. F dị iche iche ...
BIB bụ ụdị nkwakọ ngwaahịa kacha mma maka mmiri ọñụñụ
site admin na 21-09-17
Nkwakọ ngwaahịa akpa n'ime igbe, nke a na-akpọ nkwakọ ngwaahịa BIB, bụ ụdị nkwakọ ngwaahịa kacha aga nke ọma n'afọ ndị na-adịbeghị anya na nkwakọ ngwaahịa ọhụrụ zuru ụwa ọnụ, n'ihi nchekwa ya, ịdị ọcha ya, ịdị mma ya, njirimara gburugburu ebe obibi, mmepe ngwa ngwa nke European na America. ...
Akpa n'ahịa nkwakọ ngwaahịa na-ewu ewu, dị mma yana uru dị mma
site admin na 21-09-07
Nri ndị mmadụ bụ ụbọchị, nri na nchekwa na mbụ. N'ime ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa na-aga n'ihu n'oge a, ndị mmadụ na-enwewanye nchegbu banyere nchekwa na ịdị mma nke nkwakọ ngwaahịa. Yabụ kedu ihe ga-emetụta nchekwa nke nkwakọ nri? Ihe nkwakọ ngwaahịa bụ ...
Kedu ihe bụ akpa na nkwakọ ngwaahịa igbe?
Akpa n'ime igbe bụ ụdị nkwakọ ngwaahịa nke na-ejikọta igbe, akpa na tube ọnụ, na-eme ka mbufe na nkesa nke ngwaahịa mmiri mmiri na-arụ ọrụ nke ọma na izere enweghị mmetọ. Obere akpa: obere akpa ahụ nwere ọtụtụ fim ...